Kun munaafiqa -
Gaddaan bakka buutee
Yakka malee dhumtee
Badii hin hojjannee
Harmee tee ilaaltee
Garaan si dadhabee
Jettee biyyaa baatee
Abdii fuula duraaf
Nan jiraadha jettee
Kanatu na qunnamaa
Takkaa yoomi tilmaamtee?
Tan waan cufaa beektu
Diinni akka jiru
Maaf itti hin akeektuu?
Atis jara wajjiin
Kan miskiina nyaattu!
Jaannata hin seenu
Dhageenyee hin beeknu
Jarri islaamaa mitii
Nageenyaa fi jaalalaa
Rabbiin nama uume
Yoomi namaaf dabarsee
Kenne angoo isaa!
Kan dhiigaan dhaadatu
Nama akka isaa
Kan qalee gammadu
Yoo azaabaa malee
Jannata hin argatuu
Gocha garee kanaa
Musliima bakka hin bu’uu
Maaf walitti maknaa?
Previous Konkolaataan horii fe’ee gara Jimmaatti deemuu ture tokko gara galuun battalumatti nama saddeet fixe
Next Jaarmaya Tokummaa Baqattoota Oromoo A B O Yaman